‘पत्रकारिताले साहित्यलाई कहिल्यै छायामा पार्दैन’ : प्रतीक | चितवन पोष्ट
‘पत्रकारिताले साहित्यलाई कहिल्यै छायामा पार्दैन’ : प्रतीक
कास्कीको रुपा गाउँपालिका वडा नं १, स्यास्त्रीमा बुबा भद्रकृष्ण खनाल र आमा विष्णुमाया खनालको जेठोे सन्तानका रुपमा जन्मेका प्रेस स्वतन्त्रताका सेनानी तथा साहित्यकार बद्रीविनोद प्रतीक चार दशकअगाडिदेखि निरन्तररुपमा पत्रकारिता र साहित्यका क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । उनी हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं १२, रानीपौवामा बस्दै आएका छन् ।
प्रतीकका ‘स्वीकार’, ‘झरेको पात’ र ‘उडान’ तीन उपन्यासका साथै तीन दर्जनभन्दा बढी कथा प्रकाशित छन् । प्रस्तुत छ, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनै प्रतीकसँग चितवन पोष्ट दैनिकले गरेको संवाद :
१. चार दशकअगाडिदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहन्छ । नेपालको पत्रकारिताको अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
– चार दशकभन्दा बढी पत्रकारिता र साहित्य दुवै क्षेत्रलाई समानान्तररुपमा अँगालेँ । तर, धेरै समय पत्रकारिताले साहित्यलाई थिचेर उठ्न दिएन । यतिबेला साहित्यले पत्रकारितालाई थिच्न थालेको छ । पत्रकारितामा कम समय र साहित्यमा बढी समय दिएको छु । पत्रकारिता पहिलेको भन्दा भिन्न छ, लेटर प्रेसमा अक्षर खोजेर, जोडेर छापिएका पत्रपत्रिकाहरु अहिले कम्प्युटर टाइपिङ हुँदै डिजिटल भइसकेका छन् । सञ्चारको पहुँच पनि त्यसैअनुरुप बढेको छ । अहिले सूचनाको दुःख छैन ।
२. पत्रकारितामा राजनीतिक प्रभाव कत्तिको पर्छ ?
– राजनीतिक प्रभाव त हरेक क्षेत्रमा पर्दछ । अराजनीतिकभन्दा राजनीतिकहरु नै संस्कारयुक्त हुन्छन्, यसको असर हरक्षेत्रमा छ । पत्रकारिता पनि एउटा विचारबाट निर्देशित हुन्छ नै, समाचारमा तथ्यसत्य भए पनि विचार, दृष्टिकोण, टिप्पणीजस्ता धेरै विषयहरुमा राजनीति देखिन्छ । यो अति विकसित मुलुकहरुमा पनि हुन्छ ।
३. आफ्नो राजनीति सफल बनाउन नेताहरुले पत्रकारहरुलाई पाल्ने काम गरेका छन् भनिन्छ नि । यसमा कत्तिको सत्यता देख्नुहुन्छ ?
– सक्ने र क्षमता हुनेले जसले जसलाई पनि पाल्छ, यसमा केही भन्न मिल्दैन । सबै राजनीतिक नेताहरुले त्यसो गर्न सक्दैनन् । पावर भएका नेताहरुले पत्रकार पाल्दैनन्, बरू पत्रकारहरुले पावरदारको सेवा गर्न पुग्छन् । यसैले भन्न खोजिएको होला, तर यो स्थायी होइन । पावर जता ढल्कन्छ उतै लाग्ने एकथरी चरित्र हुन् तिनीहरु ।
४. अनलाइन मिडियाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
– अनलाइन मिडिया यतिबेला चर्चामा छ, साथै अनिनियन्त्रित पनि । सुनेको भरमा त्यत्तिकै लेख्नेहरु पनि छन् । सत्यतथ्यमा भन्दा हावामा अनलाइन आउने क्रम छ, यस्तो अनलाइनको भर हुँदैन । व्यवस्थित किसिमले आफ्नो पहुँच र विश्वसनीयता बढाउन सकेमा अनलाइनको भविष्य सुन्दर छ ।
५. तपाईं त साहित्य लेखनमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, पत्रकार भएर साहित्यकार हुनुभएको कि साहित्यकार भएर पत्रकार हुनुभएको ?
– म साहित्यमा रूचि राख्थेँ, पढ्थेँ र लेख्थेँ, साथै प्रकाशन पनि गर्थें । त्यही रूचिले मलाई पत्रकारितामा पु¥यायो, म साहित्यबाट पत्रकारितामा गएको हुँ ।
६. तपाईंका तीन दर्जन कथाहरु र तीनवटा उपन्यास प्रकाशित छन् । आफ्नो लेखनबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– मैले जीवनमा तीनवटा उपन्यास लेखेँ, साथमा चार दर्जनजति कथाहरु पनि लेखँं । बीस वर्षजति दैनिक अखबारको सम्पादक थिएँ । लेख, रचना, टिप्पणी, दृष्टिकोण अगणित छन्, यसको हिसाब आउँदैन । यसोे सोच्दा लेख्नकै लागि जन्मेको हुँ कि जस्तो लाग्छ ।
सन्तुष्टि नभएको भए यसरी किन लेख्थेँ र ? अहिले पनि दुईवटा उपन्यासको पाण्डुलिपि तयार भइसकेका छन् । एउटा सम्पादनमा छ, अर्को पनि लगभग टुंगिन लागेको छ । आख्यान लेख्दा कहिल्यै थकाइ लागेको महसुस नै भएन । लेखनमा सन्तुष्टि भएकै कारण होला भन्ने लाग्छ ।
७. धेरैले तपाईंलाई साहित्यकार कम र पत्रकार बढी भनेर चिन्छन् । तपाईंको पत्रकारिताले गर्दा साहित्य विधा छायामा परेको हो ?
– पत्रकारिता दिनदिनै देखिने र चर्चामा आइरहने विषय हो । कथा, उपन्यास त्यसरी आउँदैनन् । एउटा उपन्यास तयार पार्न कम्तीमा पनि २/४ वर्ष लागिहाल्छ । लेखन सकेर मात्र हुँदैन, सम्पादनदेखि प्रकाशनसम्म पुग्दा धेरै समय लाग्छ ।
लामो अन्तरालमा आउने कृतिको चर्चा कम हुनु स्वाभाविक हो । तर, मह¤व दुवैको आआफ्नै ठाउँमा छ । पत्रकारिता पानीको फोकाजस्तो हो, पत्रकारिताले साहित्यलाई कहिल्यै छायामा पार्न सक्दैन ।
८. तपाईंले लेख्ने कथा र उपन्यासका मूलभूत विशेषता के हुन् ?
– मेरा कथा र उपन्यासहरु जीवन र जगत्का बीचमा रहेका छन् । मैले लेख्ने समाजको कथा हो, समाजभित्र सुखदुःख, मायाप्रेम, सद्भाव, शिक्षा, सूचना सबै कुरा हुन्छन् । म यिनै विषयहरुमा लेख्छु ।
९. यो उमेरमा पनि भर्खरका युवायुवतीका प्रेमपरक कथा र उपन्यासको यथार्थ चित्रण गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?
– उमेरले माया, प्रेम, यौन चिन्दैन भन्न मिल्दैन । यी सब अनुभूत गरेका विषय हुन् । जब म युवायुवतीका बारेमा लेख्न थाल्छु, त्यस क्षण म पनि उनीहरुकै उमेरबराबर भएर लेख्छु । मलाई त्यतिबेला खुब आनन्द आउँछ । युवायुवतीहरुको प्रेम र यौनका सन्दर्भहरु नयाँ होइनन् । यो आफूले भोगिसकेको विषय हो । आफूले भोगेकोे कुरा अरुको आड लागेर लेख्दा झन् मज्जा हुन्छ ।
१०. पहिलाका दुई कृति ‘स्वीकार’ र ‘झरेको पात’ भन्दा पछिल्लो कृति ‘उडान’ के कुरामा फरक छ ?
– ‘स्वीकार’ आञ्चलिक परिवेशमा लेखेँ । त्यसले त्यतिबेलाको समाजको चरित्र चित्रण गरेको छ । ‘झरेको पात’ले पञ्चायतकालीन व्यवस्थाभित्रको कथावस्तु झल्काएको छ । प्रेम र यौन दुवै नै छुटेको छैन । ‘उडान’ अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेत समेटेको उपन्यास हो, यसमा पनि जीवन छ, प्रेम छ, यौन र कुण्ठाहरु छन्, मनोविज्ञान छ, समग्रमा भन्दा जीवनदर्शन छ ।
११. उपन्यासमा आफ्नो भोगाइका अनुभूति बढी छन् कि काल्पनिकता ?
– उपन्यासमा भोगाइ र अनुभूतिहरु पनि हुन्छन् । कुनै पात्रलाई अगाडि राखिएको हुन्छ, उसको कथा भए पनि नाम–ठाम सबै कुरा फेरेर काल्पनिक बनाउनुपर्छ । त्यसैले, केही कुराहरु काल्पनिकजस्ता लाग्नु स्वाभाविक हो ।
१२. साहित्यमा आख्यान विधालाई किन रोज्नुभयो ?
– आख्यान साहित्य धेरैले रोज्दैनन्, धेरैजसो कविता लेखेर साहित्यमा उदाएका छन् । मेरो सबभन्दा पहिलो रचना कथा प्रकाशन भयो । मलाई कथा, उपन्यासमै रस बस्यो । कविता लेख्नेतिर लागिनँ । विसं २०३५/३६ सालतिर मुक्तकको बहार आयो, त्यतिबेला रहरले लेखेँ । अहिले पनि कहिलेकाहीँ मुक्तक र गीत लेख्छु, तर प्रकाशन गर्दिनँ ।
१३. नेपालमा कथा र उपन्यास लेखेर बाँच्न सकिने अवस्था छ ?
– पहिलाभन्दा अहिले सुधार भएको छ । राम्रो लेख्न सकियो भने रोयल्टी, पेश्की दिएर उपन्यास प्रकाशन गर्न प्रकाशकहरु आउँछन् । तर, स्तरीय लेख्नुप¥यो । बिक्रीवितरण पनि बढिरहेको छ, यसले गर्दा लेखेर बाँच्न सकिँदैन भन्ने लाग्दैन । मैले तीनवटा उपन्यास प्रकाशनमा ल्याएँ, मलाई तिनीहरुले सन्तुष्टि दिइरहेका छन् । ‘झरेको पात’को दोस्रो संस्करण आएको छ, ‘उडान’ पनि दोस्रो संस्करणको तयारीमा छ । ‘स्वीकार’को माग पनि आइरहेको छ । यतिबेला ‘स्वीकार’ पुनः प्रकाशनका लागि परिमार्जन र सम्पादनको क्रममा छ ।
१४. अन्त्यमा, तपाईंको लेखनीले नेपाली साहित्यलाई अझ फराकिलो बनाओस् भन्दै शुभकामना !
– हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छुु, मेरा विचारहरु सार्वजनिक गरिदिनुभएकोमा धन्यवाद ।
राप्ती । खरले छाएको झुप्रो घरमा अमरबहादुर चेपाङको परिवार बस्थ्यो । गत साउन १७ गते जंगली हात्तीले आक्रमण गर्दा उक्त...